पाकिस्तानले भारतसँग कश्मीरको सट्टा माधुरी दीक्षित मागेपछि..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पाकिस्तानले भारतसँग कश्मीरको सट्टा माधुरी दीक्षित मागेपछि...
मुम्बइ। ९० को दशकमा बलिउडमा राज गर्ने हिरोइन माधुरी दीक्षितको आज जन्मदिन हो । माधुरी आज ५१ वर्षकी भएकी छिन् । माधुरीले कैयौं हिट फिल्ममा काम गरिन् । एक समय फिल्ममा काम गर्ने महिला कलाकारमध्ये सबैभन्दा धेरै पारिश्रमकि लिने कलाकार माधुरी बनेकी थिइन् ।
कुनै बेला माधुरीको क्रेज यतिसम्म थियो कि उनका फ्यान पाकिस्तानमा पनि अत्याधिक थिए । कश्मीरको सीमामा भारत पाकिस्तान युद्ध भइरहेका बेला पाकिस्तानीहरुले ‘हामी कश्मीर छोडिदिन्छौं हामीलाई माधुरी दीक्षित देउ’ भनेको चर्चा अहिलेसम्म चलिरहन्छ ।
संसारका निकै चर्चित चित्रकार एमएफ हुसेन माधुरीका निकै ठूला फ्यान थिए । उनले माधुरीको फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ ६७ पटक हेरेका थिए । जब माधुरीले आजा नचले फिल्मबाट कमब्याक गरेपछि हुसेनले पूरै थिएटर बुक गरेका थिए ।
दिल्लीको फेसबुक पेजमा लाइभ आएर सन्दिपले दिए फ्यानका जिज्ञासाको जवाफ (भिडियो)